Marwadda Madaxweynaha Iyo Wasiirka Maaliyadda Oo Dacwad Ku Oogay Wargeyska Ogaal |
Hargeysa(GNN)Iyadoo habeen hore maamulka wargeyska Ogaal looga yeedhay xarunta C.I.D ee Hargeysa, isla markaana wax laga waydiiyay warar wargeysku hore u baahiyay, ayaa xalay fiidkiina waxa soo gaadhay xarunta wargeyska Warqad yeedhmo ah oo amraysa in madaxa maamulka wargeysku hortago maxkamadda gobolka.
Gudoomiyaha wargeyska Ogaal Muuse Jaambiir ayaa sheegay in curashada arrintani ka soo jeedo warar uu wargeysku faafiyay oo ku saabsanaa arrimaha haamaha shidaalka ee hadalhaynta wareejintoodu weli taagan tahay. “ilaa hadda si cad uma hayo, balse warar aan helay iyo su,aalaha la I waydiiyayba waxa ka dhadhamaysa, in marwadda madaxweynaha iyo wasiirka maaliyaddu ay dacwad ku oogeen Ogaal. inkastoo ay i soo gaadhay in markii hore ku talagalku ahaa in la i xidho, meeshana la xidho, haddana waxa igu maqaalo ah in looga wareegay sidan, xaqiiqaduse way soo bixi doontaa . Ilaa hadda waxaanu og nahay in qoonsimaadku ka dhashay, war uu hore u faafiyay wargeysku oo ay ku jirtay, in labada marwo ay ka mid yihiin hormoodka qorshaha wareejinta haamaha iyo in dano ugu jiraan. Waxa kale oo raaca haasaawaha iyo tusaalayaasha kartoonka wargeyska ee Carraale waddani iyo dareenka dadka ee dhanka ka ah wareejinta haamaha ee aanu baahinay. “ayuu yidhi Muuse Jaambiir.
Wuxuu intaa ku daray oo uu yidhi; “ Xaq baa loo leeyahay in laga dacwoodo wargeyska, Marwadda madaxweynaha iyo wasiirka maaliyaduna haday qoonsadaan wax gef ku ah xaq bay u leeyihiin, anaguna ka wargeys ahaan waxaanu xaq u leenahay in aanu helo caddaalad ka madax banaan awooddooda oo taayadana sugta, toodana sugta. Halkay ku dambaysana waynu dhawri. Xigasho Ogaalnews.net